Haddii aad ay hareerahayga joogi jireen markii MP3 ciyaartoyda jiray ka hor, waxay u badan tahay in aad yeelan doontaa oo xul ah ee CD-yaal gurigaaga ama ku kaydsan iska aad u hurdaysan dabaqaddii. Halkii tagay CD-aad jeceshahay in ay soo ururiyaan Carro, sababta aan iyaga badalo files digital in aad awood u yeelan doonaan in ay ciyaaro aad casriga ah iyo qalab kale oo galay? Halkan waxaan ku sharxi doonaa saddex siyaabood fudud Macdan audio ka CD-yada.
Habka 1: Isticmaalka Windows Media Player
Habka 2: Isticmaalka Lugood
Habka 3: Isticmaalka Max
Isticmaalka Windows Media Laydinka soo karaa audio ka CD-aad ee talaabooyin fudud oo kaliya dhowr. Hoos waxaan kuugu ku qeexan tallaabooyinka aad u raaco si.
Talaabada 1: Marka hore waxaad u baahan doontaa inaad u tagto Menu Start ee aad kombuutarka Windows ama laptop iyo qaybta 'All Programs' ah, dooro Windows Media Player.
Talaabada 2: Sug software ah in la furo ka dibna gelisaa CD galay drive disk ka. Laga soo bilaabo halkan, Windows Media si toos ah u akhriyi doonaa disk iyo soo bandhigaan magacyada wadada.
Tallaabo 3: U tag 'Rip Settings "sare ee Windows Media ee Player uu furmo suuqa. Dooro "Qaabka 'ka dibna' MP3. ' Inkastoo aad ku sugan tahay 'Rip Settings "waxa kale oo aad u baahan doontaa in ay doortaan' Tayada Audio. ' Tani waxay aad u saamaxaaya in ay doortaan bitrate at kaas oo MP3 faylasha waa la dooxi doonaa. The bitrate sare, tayada fiican MP3 uu noqon doono. Waxaa xusid mudan hayo hay in bitrates sare abuuro files waaweyn.
Talaabada 4: Haddii ay jiraan heeso gaar ah oo ku saabsan album in aadan jeclaan ama aadan rabin in aad dooxi doontaa, si fudud uncheck sanduuqyada socda tareenka. Press Next badhanka Rip CD helay sare ee Windows Media ee Player uu furmo suuqa.
Talaabada 5: '. Copy Protection "Ka hor inta dooxeen aad files audio, Windows weydiin doonaa haddii aad rabto in lagu daro Xaqiiqadii tani waa nooc ka mid ah farsamada casriga ah ee Xuquuqda Management in cidhiidhya ee kumbiyuutarada iyo qalabka ciyaari karaan faylasha. Haa ama maya Dooro kadibna riix OK si ay u bilaabaan ka fiirsato.
Talaabada 6: Waad joojin kartaa jeexid wakhti kasta adiga oo riixaya ah 'Stop Rip' button (icon cas) helay sare ee daaqadda. Marka ciyaaryahanka ayaa ku dhameysatay soo saarida ee files audio ka CD, iyagu lagu dari doonaa maktabadda Windows Media Player. Ka dibna waxaad awoodi doontaa inaad furaysto ee casriga ah ama MP3 ciyaaryahan, u tag music maktabadda, heleen oo hoos 'Dukumentiyada' iyo in qalab aad u gudbiyaan cusub files audio MP3.
Haddii aadan haysan PC Windows ama ha isticmaalin Windows Media Player, Laydinka soo karaa audio ka CD adigoo isticmaalaya Lugood. Raaca tallaabo hagitaan talaabo talaabo hoos ku qoran macluumaad dheeraad ah.
Talaabada 1: Burcad Lugood oo taga si 'aad rabtid.' Waxaad ka heli doontaa adigoo gujinaya menu Lugood ugu sarreeya ee suuqa.
Talaabada 2aad: In sanduuqa kor u soo booda aad arki doontaan Marka aad geliso CD Audio ah: Waydii in ay dajiyaan CD. " Riix badhanka soo socda in this oranaya goobaha dejinta.
Talaabada 3: From hoos u soo dejiyey in liiska pop ah ilaa sanduuqa, dooro 'MP3 Encoder.' Markaas waxaad u baahan tahay in ay doortaan 'tayo sare leh (160 kbps)' ka goobaha wuxuu soo daadiyaa menu hoos ku qoran. Tani waa meel fiican xoogaa si ay u isticmaalaan sidii ay bixisaa dheelitir fiicani ka dhex tayada iyo baaxadda file.
Talaabada 4: Waxaad markaas u baahan doontaa inaad ku shuban aad CD galay drive disk ah. Bixinta Lugood waa ciyaaryahan default aad, CD si toos ah shuban doono iyo liiska track ay muuqan doonaa suuqa kala Lugood. The hubi sanaadiiqda yar ee soo socda in ay liiska wadada u oggolaadaan in aad uncheck wax songs in aadan rabin Macdan CD ah.
Talaabada 5: Riix 'Import CD' button. Heeso aad Markaasaad bilaabi doonaan in ay soo saaro iyo badalo galay MP3 files. Marka dejinteeda dhamaato, songs muuqan doonaa in Lugood aad iyo aad awood u yeelan doonaan in ay iyaga ku shuban rogtid oo aad iPod, iPad iyo iPhone.
Haddii aad tahay connoisseur music ah waxaana ay doonayaan inay isticmaalaan qalab taageera tayada sare saarista audio, waxaan ku talinaynaa in la isticmaalayo Max. Tani waxay u furan il software xor u yahay inuu kala soo bixi oo ku haboon dadka isticmaala Mac. Waxa ay taageertaa qaabab tayo sare leh, kuu oggolaadaan in aad soo saaro iyo badalo audio ka CD-aad jeceshahay galay qaabab badan oo kala duwan audio.
Talaabada 1: Marka hore waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo software ah. Nooca Max shawladda audio iyo xidhiidhka ka soo bixi doona. Waxaa soo bixi doonaa sida file zip ah, si aad u baahan doontaa in aad soo saaro content in ay folder cusub, ka hor inta uusan furin.
Talaabada 2: Marka aad dhamayso soo saarida, furto software ah oo aad qaadan doonaa shaashadda weyn. Marka aad is geliso CD ah, software waa in si toos ah dib u soo ceshano horyaal track iyo macluumaad. Haddii aan samayn, riix batoonka 'su'aal'.
Talaabada 3: Riix 'Max' ee ugu sareysa, ka tagay kooxda gacanta u furmo suuqa ka dibna dooro 'aad rabtid.' Halkan waxaad awoodi doontaa inaad si ay u dejiyaan-beegyada uu audio aad. In guddi 'General' ah, ka fiiri sanduuq sax, waayo,
Dynamically qarin iyo muujiyaan daaqadaha
Si toos ah u bartaan farshaxan iyo magacyada track
Si toos ah badbaadin macluumaad disc
Talaabada 4: In guddi isku, guji "qaabab. ' Halkan waxaad ka dooran kartaa liiska of qaabab wax soo saarka la heli karo. Waxaad dooran kartaa qaabab aad u baahan tahay adigoo isticmaalaya button + ah. Tani waxay iyaga ku dari doonaa "qaabab wax soo saarka qaybiyay liiska. Waxaad markaas u baahan tahay inaad guji 'Encoder Settings' si aad u dhigay karaa koobin audio ah.
Talaabada 5: In 'Deji Settings' waxaad dooran kartaa tayada encoder ah. Waxaad dooran kartaa ka ugu fiican, '' hufan, 'ama' la qaadi karo 'iyo barnaamij si toos ah ugu taagi doonaa xuduudaha kale, ama waxaad dooran kartaa caado, halkaas oo aad awood u yeelan doonaan in ay astaysto kuu gaar gaar ah audio. Marka aad waxan ku samaysay, riix OK si aad u codsato goobaha.
Talaabada 6: Tag ah 'Output' tab soo socda. Halkan waxa aad sameyn kartaa folder caga sanduuqa goobta ka. Waxa kale oo aad fursad u astaysto magaca file saarka adigoo sax ku calaamadaynaya la isticmaalayo qaab caado u magacaabista file wax soo saarka ah. '
Tallaabo 7: Next tagaan tab 'Ripper' si aad u dooran kartaa hab ripper aad rabto in aad isticmaasho. Ripper aasaasiga ah waxaa loogu talagalay kuwa doonaya dooxeen in uu si deg deg ah u buuxiso. Haddii aad rabto in aad sabab u badan oo isku dheelitiran u dhaxeeya dooxeen xawaaraha iyo soo saarista saxnimada, dooran 'ripper barbardhigo. " Haddii saxnimada waa mudnaanta dooran 'cdparanoia.' Xir daaqadda iyo laabto shaashadda weyn.
Tallaabo 8: Hubi in dhammaan tareenka in aad rabto in aad soo saaro leeyihiin sax ah intii iyaga ku xigtayna ka dibna riix soosaaray. Marka saarista dhamaato, aad files cusub waxaa laga heli karaa folder caga aad doortay.
Qaabab audio kala duwan (marka laga reebo MP3 iyo regelingen) X
Inkastoo dad badan oo u soo diri CD-yada si ay u shirkadaha bixiya in la beddelay MP3s, aad dhab badbaadin karo lacag aad u badan ay u sameynayaan naftaada. Bixinta aad leedahay software kor ku ciyaaray, audio soo saarida ka CD waa u fududahay - xataa wixii technophobes halkaas!
> Resource > Music > 3 Siyaabaha la soo saaro audio ka CD